Hatsaraina ny fari-piainan’ny VOI ary ahena ny fiankinan-doha amin’ireo haren-javaboaary ao an’ala. - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Hatsaraina ny fari-piainan’ny VOI ary ahena ny fiankinan-doha amin’ireo haren-javaboaary ao an’ala.
Rasolonjatovo Willy il y a 7 jours
Miasa amin’ny fanatsarana ny tontolo iainana hatrany ny orinasa Ambatovy hatramin’ny niandohany niasa teto Madagasikara, ary miara miasa amin’ireo vondron’olona eny ifotony (VOI).
Isany imasoan’ny orinasa Ambatovy ny famerenana indray amin’ny endriny teo aloha ny ala teo amin’ireo toerana notrandrahany. Ho fanajana ny teny nomeny araka ny voalaza ao amin’ny Bokinandraikitra momba ny tontolo iainana dia nataon’Ambatovy mifanaraka amin’ny vokatra tsara azo nandritra ireo valo taona nanaovany andrana ho an’ny fanarenana. Ankoatra izay, dinihin’ireo teknisiana ao akaiky ireo karazan-kazo voarakitra ao amin’ny « inventaire floristique » ho an’ny toeram-pitrandrahana (vita tamin’ny taona 2010) mba ahitana ireo fototry ny zavamaniry ampiasana ho an’ny fanarenana. Mba hahazoana ala vaovao afaka ampiasaina amin’ny zavatra maro dia natao ho laharam-pahamehana voalohany ny famokarana zanakazo sarobidy eo amin’ny lafiny toekarena sy tontolo iainana. Marihina fa manana toeram-pambolen-janakazo lehibe tokoa ny orinasa. Karazana zavamaniry 438 amin’ny 1 904 isa izay ahitana sokajy 306 amin’ny 691 isa, ary fianakavian-javamaniry 79 amin’ny 152 isa. Lafiny maromaro no dinihina ka jerena ny mahasarobidy eo amin’ny lafiny tontolo iainana ilay zavamaniry, izany hoe dinihina, ohatra, raha afaka ataon’ny biby toeram-ponenana na sakafo. Jerena ihany koa hoe manamora ny fitombon’ireo zavamaniry hafa ve ilay karazana (plantes nurses), na afaka mitroka ireo metaly ao amin’ny tany, na koa tsy marefo. Tsy hadinoina ny mampitaha ireo karazana ireo amin’ireo zavamaniry hita tao amin’ny ala teo aloha ary ny asany amin’ny fifandimbiasan’ny zavamaniry.
Ho fanampin’izay dia jerena ihany koa ny mahasarobidy ilay hazo ho volena eo amin’ny lafiny toekarena ka dinihina raha karazan-javamaniry azo atao fanafody, ampiasaina amin’ny fanaovana fanaka na ilaina amin’ny fananganana fotodrafitrasa. Ny 42,5% amin’ireo karazan-javamaniry ireo dia sarobidy tokoa eo amin’ny lafiny toekarena sy varotra, 28% afaka atao fanafody, ary 24% dia sakafo na toeram-ponenan’ny karazana biby mampinono madinika. Nojerena akaiky ihany koa ireo karazana zavamaniry mitombo haingana (espèces pionnières) izay afaka ampiasaina amin’ny fisorohana ny fihotsahan’ny tany sy ny fiforonan’ny atao hoe « biomasses » ary afaka manaloka ireo karazan-javamaniry an’ala hafa. Nodinihina ihany koa ny hakitroka sy ny mahasamihafa ireo karazan-javamaniry tsirairay ireo. Tahaka ireo karazan-javamaniry nosokajiana ho matanjaka sy mafy nandritra ny andrana natao tao Analamay tamin’ny taona 2010, dia hita amin’ny fomba fiasa fa azo tanterahina tsara, any amin’ny faha-12 taonan’ny asa fanarenana, ny fametrahana ala mahaleotena miroso makany amin’ny tanjona tratrarina.
Ambatovy sy ny vondron’olona ifotony
Miara-miasa ihany koa amin’ireo mponina avy eny ifotony ny Orinasa amin’ny famerenana ny tontolo iainana amin’ny endriny teo aloha. Sady manome asa no mikolokolo ny tontolo iainana. Rehefa tsy manana fivelomana ireo mponina dia ny ala ihany no trandrahany tsikelikely ao ka mitarika any amin’ny fahasimbana.
Tamin’ny taona 2011 no nanomboka ny fiaraha-miasa teo amin’ireo mponina eny ifotony manodidina ny toeram-pitrandrahana ataon’ny Ambatovy. Notohanana eo amin’ny lafiny teknika ireo mpikambana ary nomena fiofanana mikasika ny fomba fitantanana fikambanana tantsaha.
Teo ihany koa ny fanampiana azy ireo tamin’ireo ny dingana samihafa amin’ny fangatahanafamindram-pitantanana haren-javaboaary any amin’ny Fanjakana Malagasy.
Ho fanampin’ny fanohanana amin’ny lafiny teknika, amin’ny fitantanana ny VOI sy ny hetsika ataony araka ny voalazan’ny bokinandraikitra, dia mandray anjara amin’ny fampiroboroboana ny fidiram-bolan’ireo mpikambana ihany koa i Ambatovy.
Tena ilaina ny fandraisana andraikitra mivantana ataon’ny mponina eo an-toerana mba hampahomby ny fiarovana ny tontolo iainana. Tafiditra ao anatin’ireo hetsika fiarovana ny tontolo iainana ataon’Ambatovy manodidina ny toeram-pitrandrahana ao Moramanga ny fiaraha-miasa akaiky misy eo aminy sy ny Vondron’Olona eny ifotony.
Manampy amin’ny lafiny maro ny VOI ny orinasa mba hahafahan’izy ireo manangana Vondron’olona Ifotony (VOI) sy hahafahany mitantana ireo haren-javaboaary misy eo an-toerana.
Tanjona voalohany amin’izany ny fampirisihina azy ireo hiaro ny tontolo iainana. Ary ny tanjona faharoa kosa dia miompana amin’ny fanatsarana ny fari-piainany sy ny fampihenana ny fiankinan-doha amin’ireo haren-javaboaary ao an’ala.